दाँत पहेलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो छ चम्किलो बनाउँने घरेलु उपाय – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/दाँत पहेलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो छ चम्किलो बनाउँने घरेलु उपाय
दाँत पहेलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो छ चम्किलो बनाउँने घरेलु उपाय
काठमाडौं – दाँत हाम्रो शरिरको महत्वपुर्ण अंग हो । खानालाई चपाउन मात्र नभई अन्य धेरै कुराहरुमा दाँतले सहयोग पुर्याउछ । यदि हाम्रो दाँत पहेलो छ भने अरुसँग हाँस्न निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ । बाहिर हिड्दा पनि दाँत चम्किलो छैन भने लाज हुन्छ । दाँत जति सफा गरे पनि कहिलेकाही दाँत सफा हुदैन ।
यदि दाँतलाई सफा र चम्किलो बनाउन छ भने केहि उपाय अपनाउन जरुरी छ । दाँतलाई सफा बनाउन तुलसीको पातलाई घाममा सुकाएर पिसेर पाउडर बनाइ ब्रस गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै दाँत स्वस्थ र सफा गर्न कागती र नुनको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यदि कागती र नुन मिसाएर दाँतमा रगडेमा दाँत सफा हुन्छ । त्यस्तै अर्को उपाय दाँत सफा राख्न सुन्तला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सुन्तला ताछेर केहि हप्ता सुत्ने बेला दाँतमा रगडेमा खाँत सफा हुनछ । त्यस्तै स्ट्रबेरी काटेर टुक्रा बनाई दाँतमा दल्नुहोस् । दाँतमा भएको पहेँलोपन हट्छ ।
मिर्गौलाको पत्थरी हटाउन पालुंगो खानुस्